'गाँजा'को वैधानिकताले आउला त समृद्धि ?
सम्पादकीय आइतबार, माघ १९, २०७६, १०:१०:००
पर्यटन बोर्डको भाँडभैलो र मन्त्री भट्टराईको निरिहता आइतबार, माघ १२, २०७६, ०८:२८:००
‘विण्टर क्याम्प’ को लुट : रोक्ने कस्ले ? आइतबार, माघ ५, २०७६, ०८:५०:००
टिपर आतंक : समस्याको पहिचानमै कमजोरी आइतबार, पुस २७, २०७६, ०८:२६:००
मगन्तेमुक्त क्षेत्र बनाउने अभियानः सस्तो लोकप्रियता कि दीर्घकालिन समाधान ? आइतबार, पुस १३, २०७६, १३:१०:००
मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई साँढेजस्तो छोड्नु हुन्न सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम हातहातै फिर्ता हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग जायज छ । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकको दादागिरी कायमै छ । तर, सरकार निरिह छ । यो कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? सोमबार, मंसिर ९, २०७६, १२:३९:००
अनुसन्धान प्रभावित नपारौं शुक्रबार, साउन ३१, २०७६, २३:४०:००
संसदको गतिरोध हटाऊँ आइतबार, साउन १९, २०७६, १६:४४:००
विपद् व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान देउ आइतबार, असार २९, २०७६, १२:५८:००
राज्यलाई बहुभाषी बनाऊ ! शनिबार, जेठ १८, २०७६, ०८:२८:००
जन-अनुभूतिविहिन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालबाट निरंकुशता तथा राजतन्त्रको सदाका लागि अन्त्यको निर्णायक आन्दोलन थियो- दोस्रो जनआन्दोलन । दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । यसकै बलमा विघठित संसदको पुनर्स्थापना भयो । संविधान सभाको निर्वाचन भयो र संविधान सभाबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा भयो । संविधान सभाबाटै नेपालको संविधान जारी भयो । बुधबार, जेठ १५, २०७६, ०९:२३:००
बुद्ध जयन्तीलाई नेपालको राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर ! शनिबार, जेठ ४, २०७६, ०७:२२:००
भूकम्पीय सुरक्षामा विशेष ध्यान दिउँ कमजोर भौगोलिक बनावट, गुणस्तरहीन पूर्वाधार र भौतिक संरचना, अव्यवस्थित वस्ती, ऐन, नियम, संहिताको बेवास्ता र जनचेतनाको कामीजस्ता कारणले भूकम्पलगायत प्राकृतिक जोखिम उच्च रहेको पाइन्छ । बिहीबार, वैशाख १२, २०७६, ०९:४१:००
लोकतान्त्रिक आन्दोलनकाे मर्मअनुसार जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याऊ अभाव, महँगी मौलाइरहेको छ । राजनीतिक उपलब्धीसंगै जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउने गरी काम गर्न सरकार अझै सफल जस्तो देखिएको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भनिएपनि जनताले पीडामुक्त हुने अवस्था छैन । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको भएपनि सबै अधिकारमा संघीय सरकारले अंकुश लगाएको गुनासो आइरहेका छन् । बुधबार, वैशाख ११, २०७६, ०७:५३:००
हवाई सुरक्षामा हेलचेक्य्राइँ मात्रै किन ? सोमबार, वैशाख २, २०७६, ०६:५९:००
नयाँ वर्ष समृद्धिको वर्ष बनोस् अस्थिर हुँदै आएको सरकार स्थिर हुँदा पनि एक वर्षमा केही भएन भन्ने गुनासो आएरहेका छन् । यस्ता गुनासोहरुको जवाफ दिने काममा सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु आफै पोख्त देखिएका छन् । राजनीतिक परिवर्तन आएपनि मुलुकमा विकास र सम्वृद्धिको परिवर्तन जनताले कल्पनामात्रै गर्नुपरेको छ । आइतबार, वैशाख १, २०७६, ०८:००:००
पीडितलाई तु- राहत देऊ ! सोमबार, चैत १८, २०७५, १६:५४:००
होलीमा आत्मियता बढाऔं होली पर्वको अवसरमा मुलुकमा भएको विकृती विसंगतीलाई सुधार गरेर जाने प्रण नेताहरुले गर्नुपर्दछ भने जनताले पनि कोही कसैले अनियमिताता तथा नकारात्मक गतिविधि गरेमा सरकारलाई सचेत र सजग बताउने आँट गर्नपर्दछ । सबैको सहयोगमा मुलुकको सम्बृद्धि हुनेछ । बुधबार, चैत ६, २०७५, १२:३९:००
कहिले बन्द हुन्छ विद्युतीय धराप ? विद्युतीय सुरक्षाको विषय पछिल्लो समयमा निकै गम्भीररुपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । लोडसेडिङमुक्त बनाएर चर्चामा आएको प्राधिकरणले विद्युतीय तारको सही व्यवस्थापन गर्न चुकेको स्पष्ट हुन्छ । घटना हुँदा जसको दोष भए पनि बिजुली लागेर कोही पनि मर्नु नपरोस् । प्राधिकरणका कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत इलेक्ट्रिसियन पनि यस्ता दुखद् घटनाको शिकार बनिरहेका छन् । यो हुनु हुँदैन । आइतबार, माघ १३, २०७५, १६:०३:००